Social Suite: Social Media Management maka nnukwu, Multi-Ọnọdụ ụlọ ọrụ | Martech Zone
Nkwupụta ulo oru Nnọọ mmekọrịta, A na-ahazi njikwa ihe eji elekọta mmadụ na-elekọta mmadụ maka nnukwu, ụlọ ọrụ ọtụtụ ebe na-ejikọ ọnụ ahịa nke ndị ahịa na weebụ, site na nyocha na ntanetị na nyocha ndị ahịa na-ege ntị na-elekọta mmadụ na njikwa obodo.
Nnukwu ụlọ ọrụ na-agbasi mbọ ike iso ndị ahịa nọ na mpaghara nwee mmekọrịta bara uru na ntanetị mgbasa ozi mmekọrịta. Ọzọkwa, a na-ahụkarị mgbasa ozi mmekọrịta site na nyocha ndị ahịa na ngwa nyocha nyochaa n'ịntanetị.
“Ihe ịma aka dị na ngwa ọrụ mgbasa ozi ndị dị ugbu a bụ na e wughị ha maka ụlọ ọrụ. Ha enweghị ike ịba ụba maka ọtụtụ ebe, yana na-enwekarị obere arụmọrụ maka nyocha na nkwenye. Social Suite ohuru ohuru na Reputation.com na enye ngwangwa zuru oke nke agbanyere buru ibu mezuo nke ndi obodo choro. Ma ọ bụ naanị ya bụ azịza nke jikọtara mgbasa ozi mmekọrịta, nyocha ndị ahịa na nyocha njikwa n'ime otu usoro, na-enye ụlọ ọrụ ụzọ iji wuo ma kwado aha ọma na ntanetị wee mee ka uto dị ngwa. ” Pascal Bensoussan, Onye isi ndị ọrụ na Reputation.com
Social Suite nke Reputation.com na-enye azịza zuru oke iji weghachite nzaghachi ndị ahịa n'ofe ọwa niile na weebụ, iji nyere ndị ụlọ ọrụ aka ịzaghachi nsogbu nsogbu ma rụọ ọrụ nke ọma tupu nsogbu abanye na nsogbu. Social Suite na-enyere ndị azụmaahịa aka:
Gee ntị ma zaghachi: Site na inyocha ihe karịrị nde webụsaịtị 80 yana mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ntanetị dị iche iche (Facebook, Twitter, Instagram na Google), Social Suite na-enyere ụlọ ọrụ aka ijide nzaghachi n'ụzọ dị mfe, zaghachi na oge ma soro ndị obodo na-emekọrịta ihe.
Na-arụkọ ọrụ ọnụ: Isi ụlọ ọrụ na ndị otu mpaghara nwere ike imekọrịta na ibipụta ya yana arụmọrụ dị mfe iji hụ na nkwenye aha na nkwenye ọsọ ọsọ, yana ngwugwu ọdịnaya n'ime mkpọsa mpaghara, mpaghara ma ọ bụ nke nwere mmasị.
ebipụta: Ndị ụlọ ọrụ nwere ike ịbawanye mmetụta nke ọdịnaya mmekọrịta ha site na ibipụta na-akpaghị aka na oge akọwapụtara. Ndị ọchụnta ego nwere ike biputere ọdịnaya nke mpaghara gị site na ngwa ngwa-ihu na ihu ọma nke Reputation.com.
Nyochaa na Report: Ihe ngwọta na-enye nghọta na-eme mkpọsa site na nsuso njikọ aka ma rute, na-achọpụta ihe kacha mma na-eme maka boosting dị ka ụgwọ akwụ ụgwọ.
Meziwanye Ahụmịhe: Ndị ụlọ ọrụ nwere ike ịchọpụta okwu arụmọrụ ugboro ugboro na-egbochi afọ ojuju ndị ahịa, ma na-eme ndozi arụmọrụ iji melite ahụmịhe na ịchụpụ azụmahịa ugboro ugboro.
N'adịghị ka ndị ahịa ntinye aka ndị ọzọ, Reputation.com na-enye nhọrọ iji nyefee mbipụta mmekọrịta mmadụ na ọtụtụ ụlọ ahịa, na-achịkwa mbipụta ọhaneze ọ bụla ma ọ bụ na-ebipụta usoro ngwakọ. API na Facebook na Instagram na-eme ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya na visibiliti miri emi. Direct API na Google My Business melite ọhụhụ na Search na Maapụ.
Tags: enterprisefranchisesgoogle azụmahịa mọtụtụ-ọnọdụaha.comnyocha mmadụmmekọrịta mmadụ na ibe yana-elekọta mmadụ na-ege ntịnyocha mgbasa ozi mmekọrịtammekọrịta mmekọrịta na mgbasa ozinlekota oruna-elekọta mmadụ ebipụtaelekọta mmadụ